Ciraaq - BBC News Somali
Baaritaan BBC Carabi : Ragga la faro xumeeyo ee Ciraaq ayaa ka badan dumarka
Dadkii la waraystay Ciraaq boqolkiiba 20% ayaa sheegay in la faro xumeeyay, halka dumarka ay ahaayeen boqolkiiba 19%.
12 Luulyo 2019
Ninkan ayaan muddo 26 sano ah ka bixin dalkiisa, isagoo ka cabsanayay in la xiro
Maryam: Waxaan hooyadey u ballan qaaday in aanan isdili doonin
Gabadhan ayaa Qisadeeda uga sheekeysay barnaamij ay sameysay BBC-da
11 Maajo 2019
Maxay tahay sababta loo soo qaban la'yahay hoggaamiyaha IS Abu Bakr al-Baghdadi?
Iyada oo dunida ay isticmaasho taknooloojiyadaha ugu casrisan haddana waxaan ilaa iyo hadda la soo qaban la'yahay hoggaamiyaha ururka IS oo ay dunida oo dhan ku raadjoogto.
Dad badan oo ku dhintay musiibo ka dhacday Ciraaq
Waxaa wali socda gurmadka lagu badbaadinayo dadka
21 Maarso 2019
Haweeney Daacish ah ‘oo canug yar ku eegatay inuu oon ugu dhinto’ Ciraaq
Haweeney xubin ka aheyd ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah oo lagu eedeeyay inay gabar yar oo shan sanno jir ah ku eegatay inay oon u dhimato xilli qoraxduna ay aad u kulushahay ayaa waxa ay gudaha Jarmalka ku wajahaysaa dambiyo dagaal.
29 Disembar 2018
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo haweeneyda koobaad Melania Trump ayaa booqasho aanan la shaacin waxa ay ugu tageen ciidammada Mareykanka ee ku sugan waddanka Ciraaq.
George HW Bush madaxweynihii hore ee Mareykanka oo geeriyooday
Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George HW Bush ayaa ku geeriyooday da'da 94 jir, sida uu shaaca ka qaaday wilkiisa, George W Bush oo isna madaxweynaha kasoo noqday dalkaasi.
1 Disembar 2018
London oo lagu arkay taallo lagu muunaynayo Sadaam Xuseen
Dadka degan xaafad ku taal London ayaa sheegay in ay lama filaan ku noqotay in xaafadooda laga taago qoraal xusuus ah oo lagu xusayo madaxweynihii hore ee Ciraaq, Sadaam Xuseen.
19 Nofembar 2018
Hooyo dalbatay in ay wiilkeeda aragto ka hor inta aysan dhiman
Haweeney u dhalatay dalka Ciraaq oo qabta cudurka Kansarka ayaa lagu wadaa in loo duuliyo dalkeeda Ciraaq si ay halkaasi ugula kulanto wiilkeeda oo 8 jir ah.
4 Nofembar 2018
Shacabka Ciraaq oo internetka ka soo dalban kara shaqada wasiirnimada
Hannaanka uu Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Caadil Cabdul Mahdi ku doonayo inuu ku dhiso golaha wasiirrada ee xukuumaddiisa ayaa qeyb ka mid laga dhigay website loo sameeyay iney shacabka ku soo codsadaan xilalka wasiirrada ee dowladda cusub.
10 Oktoobar 2018
Mareykanka oo xirayo qunsuliyaddii uu ku lahaa magaalada Basra
Mareykanka wuxuu sheegay inuu albaabada isugu dhufanaya qunsuliyadda uu ku leeyahay magaalada Basra ee ku taalla koonfurta Ciraaq isla markaasna uu ku eedeeyay Iiraan iyo ciidammada ay taageerto inay amni darro halkaasi ka abuurayaan.
29 Sebtembar 2018
Baarlamaanka Ciraaq oo doortay gudoomiye cusub
Baarlamaanka dalka ciraaq ayaa doortay gudoomiye taasi o lagu tilmaamay tallaabo muhim ah oo horey loo qaaday.
15 Sebtembar 2018
Dibadbaxyo rabshado wata oo wali ka sii socda magaalada Basra
Waxaa wali magaalaada Bsra ee dalka Ciraaq ka sii socda dibadbaxyo rabshada wata oo ay dadka kaga soo horjeedaan dowladda.
8 Sebtembar 2018
Dibadbaxyo hareeyay magaalada Basra ee dalka Ciraaq
Ila wareedyo dhanka ammaanka ah ayaa ku waramaya in dibadbaxayaal ay magaalada Basra ee dalka Ciraaq dab qabadsiiyeen dhismooyiin ay leedahay dowladda dalkaasi iyo kuwa xisbiyo siyaasadeed.
7 Sebtembar 2018
Dibadbaxayaal lagu dilay magaalada Basra ee dalka Ciraaq
Dadkan magaalada Basra dibadbaxa ka sameeynaya ayaa waxay ka mudaharadayaan dhibaatooyinka ka haysta adeegyada aasaasiga ah sida biyaha iyo weliba shaqa la'aanta jirta.
4 Sebtembar 2018
Hoggaamiyaha Daacish oo muddo dheer kadib codkiisa la maqlay
Kooxda Daacish ayaa lagala wareegay inta badan dhulalkii ballaarnaa ee ay ka maamuleysay waddamada Suuriya iyo Ciraaq.
Qatar ma waxay bixisay lacagtii madax furashada abid ugu badnayd dunida?
Wiilka Abuubakar al Baqdaadi 'oo Suuriya lagu dilay'
Wiil uu dhalay hogaamiyaha kooxda dawladda islaamiga, Abuubakar al Baqdaadi, ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay Suuriya, sida ay ku soo warrantay hay'adda wararka ee kooxda IS. Xudayfa al Badri ayaa ku dhintay "hawlgal kumaandoos" oo ka dhan ahaa xukuumadda Suuriya iyo xoogagga Ruushka,
4 Luulyo 2018
Suuq agoon xumeeyay maalintii ciidda oo xaalmarin bixiyay
21 Juunyo 2018
FaceApp : Sideed u ekaan kartaa 60 sanno kadib?
Waa kuma "Bin Laden-ka Myanmar" ee Muslimiinta "aflagaadeeyay"
Arrin aad Soomaaliya madaxweyne uga noqon karto, safiirna uga noqon Karin Kenya
Norway oo wiil Soomaali ah ku abaalmarisay geesinimadiisa
"Tallaabooyiinka Kenya waxay Farmaajo ka dhigayaan halyey qaran"